Science & Tech Archives - Yangon Media Group
လွှတ်တင်ပြီး ငါးလအကြာတွင် NASA အဝေး ကြည့်မှန်ပြောင်းက ဂြိုဟ်သစ်နှစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိ
၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇီဝကမ္မဗေဒ နိုဘယ်ဆု သိပ္ပံပညာရှင် နှစ်ဦး ဆွတ်ခူး
စတော့ဟုမ်း ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇီဝကမ္မဗေဒနိုဘယ်ဆုကို သိပ္ပံပညာရှင်နှစ်ဦး ပူးတွဲဆွတ်ခူးရရှိကြောင်း နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီက ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။ ဆုချီးမြှင့်ခံရသည့် သိပ္ပံပညာရှင်နှစ်ဦးမှာ ဂျိမ်းပီအယ်လီဘန်နှင့် တာဆုကုဟွန်ဂျိုတို့ဖြစ်သည်။ မစ္စတာအယ်လီဆန်နှင့် မစ္စတာဟွန်ဂျိုတို့သည် ကင်ဆာရောဂါကုထုံးတွေ့ရှိမှု ချီးမြှင့်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါကုထုံးသည် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော ကိုယ်ခံအားထိန်းချုပ်မှုကို တားမြစ်သည့်ကုထုံးဖြစ်သည်။...
HP Consumer Notebook အမျိုးအစား လေးမျိုး မိတ်ဆက်
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၈ HP ၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တင်သွင်းခွင့်ရရှိထားသော Royal Smart Co., Ltd မှ HP Consumer Notebook အမျိုးအစားလေးမျိုးကို စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်က Melia Hotel ၌ မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။...
ဒတ်ခ်ျ အင်ဂျင်နီယာတို့က ယင်ကောင်ကဲ့သို့ ပေါ့ပါးစွာ ပျံသန်းနိုင်သော စက်ရုပ်ကို ဖန်တီး
ဝါရှင်တန် ဒတ်ခ်ျအင်ဂျင်နီယာတို့က ယင်ကောင်ကဲ့သို့ ပေါ့ပါးစွာပျံသန်းနိုင်သည့် အတောင် ပါသောစက်ရုပ်ကို မွမ်းမံတိုးတက်စေခဲ့ပြီး အဆိုပါပျံသန်းမှုအရည်အသွေးကို ဒရုန်းသစ်တွင် အသုံးချနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဒတ်ခ်ျအင်ဂျင်နီယာတို့က သူတို့၏လေ့လာဆန်းစစ်မှုကို Science ဂျာနယ်တွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပြီး ပေါ့ပါးစွာပျံသန်းနိုင်သောစက်ရုပ်ကို ပုံဖော်ပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါ...
ရိုလာကိုစတာ စီးခြင်းဖြင့် ကျောက်ကပ်ထဲမှ ကျောက်ကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်
ချီကာဂို ရိုလာကိုစတာအမျိုးအစားအချို့ကို စီးခြင်းသည် ကျောက်ကပ်ထဲမှကျောက်ကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည့် ထိရောက်သောနည်းလမ်း ဖြစ်ပြီး အဆိုပါနည်းလမ်းကို သုတေသနပြုခဲ့သည့်အဖွဲ့အား ယခုနှစ်အတွက် ဆေးပညာဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုကို ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်သုတေသီတို့က ရိုလာကိုစတာစီးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်လက်သုတေသနပြုပြီး ကျောက်ကပ်ရောဂါဝေဒနာ ဖိစီးနှိပ်စက်ခြင်းခံနေရသူများအနေနှင့် ရိုလာကိုစတာကို ပုံမှန်စီးသင့်ကြောင်း အကြံပြုခဲ့ကြသည်။ ရိုလာကိုစတာစီးခြင်းသည်...
သိပ္ပံပညာရှင်တို့က အသက်ရှင်သန်မှု သဲလွန်စအတွက် ခဲနေသော ရေစီးကြောင်းကို လေ့လာစူးစမ်း
ဖာကာ သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ရေခဲအရည် ပျော်မှုအတွင်း အေးခဲနေသောရေနှင့်ပတ်သက်၍ လေးနှစ်ကြာခန့် စူးစမ်းရှာဖွေရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ကြသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်တို့က အေးခဲ နေသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင် သတ္တဝါများ လိုက်လျောညီထွေနေထိုင်ပုံကို ပိုမိုနား လည်သဘောပေါက်ရန် အားထုတ်ခဲ့ကြခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ မကြုံစဖူး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အ ပြောင်းအလဲကို ရင်ဆိုင်ရမည့်နည်းလမ်းသစ်...
အာကာသယာဉ် ကိုနိုတိုရီ – ၇ ဖြင့် အာကာသစခန်းသို့ ဂျပန်ကထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်
တိုကျို၊ စက်တင်ဘာ ၂၃ ဂျပန်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာ အာကာသစခန်းရှိ အာကာသယာဉ်မှူးအတွက် လိုအပ်သောထောက်ပံ့ ပစ္စည်းပေးပို့ရန်အတွက် စက်တင်ဘာ၂၃ ရက် နံနက် ၂ နာရီ ၅၂ မိနစ်နာရီက ဂျပန်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း တာဂိုရှီးမား စီရင်စုတာနီဂါရှိမာ...
Adobe ကုမ္ပဏီက Masketo ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီကို ဝယ်ယူရန် ပြောဆိုဆွေးနွေး
လန်ဒန် ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲပြုလုပ်သည့် Adobe System ကုမ္ပဏီက Masketo ကုမ္ပဏီကို ဝယ်ယူရန် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုပြုလျက်ရှိသည်။ Marketo ကုမ္ပဏီသည် ဆော့ဖ်ဝဲ ရောင်းချသည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂလိကအစုရှယ်ယာကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Vista Equity Partners Management ကုမ္ပဏီသည် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်နှစ်က...
ပိုးမွှားများသည် လေမှ သယ်ဆောင်လာသော အနံ့ များကို အနံ့ခံနိုင်စွမ်းရှိ
ချီကာဂို အီလီနွိုက်တက္ကသိုလ်မှ လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွင် ဖော်ထုတ်ချက်အရ အင်းဆက်ပိုးမွှားများသည် အနံ့ခံနိုင်စွမ်းရှိပြီး ထိုသို့ သောအနံ့ခံနိုင်စွမ်းက ၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်များကို ရှာဖွေခြင်း၊ ရန်သူများကို ခွဲခြားဖော် ထုတ်ခြင်း၊ အစာရှာဖွေခြင်းနှင့် ရောဂါပျံ့နှံ့ စေခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။ သုတေသီတို့က ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိမှု...
နာဆာ၏ ဂျိမ်းဝက်စ် အာကာသ အဝေးကြည့် မှန်ပြောင်းက ဂြိုဟ်သားတို့ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ဖွယ်ရှ
နယူးယောက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အာကာသ အေဂျင်စီနာဆာ၏ ဂျိမ်းဝက်စ်အာကာသအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းက အခြားကမ္ဘာမှ ဂြိုဟ်သားတို့ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ နာဆာ၏ အာကာသအဝေးကြည့် မှန်ပြောင်းအစီအစဉ်ကို ၂ဝ၂၁ ခုနှစ်တွင် စတင် ဖွယ်ရှိသည်။ ဂျိမ်းဝက်စ်အာကာသအဝေးကြည့်မှန် ပြောင်းသည် နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာ တော်လှန်...
(၂၉)ကြိမ်မြောက် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများ ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂညီလာခံ သဘောတူစာချုပ် အထိမ်းအမှတ်နေ?
မန္တလေး ခြောက်မြို့နယ်၌ ယခုနှစ်မိုးရာသီတွင် အရိပ်ရပင်များ စံချိန်တင်စိုက်ပျိုးနိုင်ရန် အမ?
မြဝတီမြို့တွင် ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်မဆောင်းဘဲ မောင်းနှင်သူများကိုပညာပေးကာလပြီးဆုံးပြီးနောက?
တောင်ဒဂုံ ၆၃ ရပ်ကွက်ရှိ အစိုးရ တန်ဖိုးသင့်အိမ်ရာ စီမံကိန်းနေရာတွင် ကျူးကျော်နေထိုင်သူများ
ရုရှားနိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ၂ဝ၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားတွင် အသုံးပြုမည့် ဘောလုံးကို Adidas မိတ်ဆက်
အမေရိကန် ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်တွင် မျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသော ဂျုံသီးနှံပင် စိုက်ပျိ??